China KwiCar Audio Car Car Harness Cable Assembly1 mveliso kunye nabenzi | Olink
Inani leModeli: iihadi zeentambo zokubopha ezingama-24
MOQ: 60 × 70 × 10 iisentimitha
Uvavanyo lwentambo yokubopha
Ukuvavanya ukusebenza kombane kwentambo okanye intambo yokubopha kunokwenziwa ngoncedo lwebhodi yovavanyo. Ibhodi yovavanyo icwangciselwe kwangaphambili ngeempawu zombane ezifunekayo, kwaye iihosi ezigqityiweyo zinokufakwa kwibhodi yovavanyo kwaye kuvavanywe ngokukodwa okanye ngamanani amaninzi.
Iimoto ziqhutywa ngeendlela ezahlukeneyo zokulawula umbane njengokukwazi ukuqala injini ngokucofa iqhosha elinye. Kunye nokwanda kwemisebenzi yeemoto, inani lezixhobo zombane ezifakiweyo liyanda. Izixhobo zokubopha iintambo zidlala indima ekunxibelelaneni nezixhobo kunye nokuhambisa umbane kunye neempawu kuyo yonke imoto. Imisebenzi iyafana nemithambo yegazi kunye nemithambo-luvo yomzimba womntu.
Okulandelayo: Indibano yekhebula yeLVDS yeVidiyo
Ukuzibophelela ngocingo oluzenzekelayo
I-Oem / i-Odm yocingo lokubopha
Intambo yokubopha kwentambo ekhokelwayo
Ukuzibophelela ngocingo oluzenzekelayo, ukubopha kwentambo ye-OEMODM ye-speci ...
Iindibano zentambo ze-Qi ezingenantambo zeFordGM ...
I-Motorcycle Wire Harness Cable Assembly
I-Motorcysle Wire Harness Cable Assembly